Wasiir Arrimaha Dibadda oo War kasoo saaray Kulankii dhex maray Madaxweynaha Somaliland. | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wasiir Arrimaha Dibadda oo War kasoo saaray Kulankii dhex maray Madaxweynaha Somaliland.
Kulan magaalada Maka ku dhex maray Madaxweynaha Somalialnd iyo wasiiro ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dood weyn ka dhaliyey Baraha bulshada, waxaana war kasoo saaray Wasiirka Arrimahga dibadda Somalia Axmed Ciise Cawad oo ka mid ahaa wasiiradii la kulmay Muuse Biixi.
Qoraal uu soo saaray Wasiir Cawad ayuu ku sheegay in kulankaasi aanu wax shaqo ah ku lahayn siyaasad ee uu ahaa kulan diimeed oo ay isku arkeen dad walaallo ah oo ku kulmay dhulka ugu barakeysan dunida Islaamka. “Waxaan yeelanay sheeko saaxiibtinimo oo aanay ka mid ahayn wax siyaasad ku lug leh” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha dibadda Somalia.
Sidoo kale wasiir Cawad oo wareysi siiyey VOA-da ayaa sheegay in kalankaasi uu ku yimid inay wasiirada Federaalka iyo madaxweynaha Somaliland ay wada deganaayeen Hal Qarsi, ayna salaan ugu tageen Madaxweynaha Somaliland, isaguna si fiican u soo dhoweeyay, ayna isu muujiyeen inay yihiin dad walaallo ah.
“Waxaan arkay dad siyaasadeynaya… siyaasad shuqul kuma lahayn.. anagu ma heysan fasax aan ka hadalno arrimaha Somalia iyo Somaliland..” ayuu yiri Axmed Ciise Cawad oo intaas ku daray inay soo arkeen dad sharaf leh oo nasoo dhoweeyay oo Soomaalinimo nagu qaabilay.
Previous articlePuntland, Xisbiyada Xasan Sheekh, Sh. Shariif & C/raxman C/shakur oo taageeray Axmed Madoobe [Akhriso]
Next articleBaarlamaan cusub oo lagu dhaarinayo magaalada Kismaayo iyo Doorashada Guddoonka oo barbar socota.